စဈအာဏာသိမျးတာဟာ ဒီမိုကရစေီကို ကာကှယျတာဆိုပွီး မွနျမာ စဈခေါငျးဆောငျ ပွောဆို – Cele Lover
မွနျမာပွညျတှငျး ဒီမိုကရစေီစနဈ ပကျြယှငျးလာနခေဲ့တဲ့ အတှကျ ကွိုးစားကယျဆယျ ခဲ့ရတယျလို့ မွနျမာ စဈခေါငျးဆောငျက မျောစကိုမွို့ နိုငျငံတကာ အစညျးအဝေးမှာ ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
စဈအာဏာသိမျးတဲ့ လုပျရပျဟာ ဒီမိုကရစေီကို ကယျဆယျတာဆိုပွီး မွနျမာ စဈခေါငျးဆောငျက ပုံဖျောပွောဆိုတာ ဖွဈပါတယျ။မကျြမှောကျခတျေ ကွုံတှနေ့ရေတဲ့ လုံခွုံရေးဆိုငျရာ ပွဿနာတှေ၊ စိနျချေါမှုတှေ
အကွောငျး နှီးနှောဖလှယျကွတဲ့ နိုငျငံတကာ အစညျးအဝေးမှာ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ စကားပွောခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ရုရှား ကာကှယျရေး ဝနျကွီးဌာနက ကမကထလုပျ ကငျြးပတဲ့ MCIS လို့ အတိုကောကျအသိမြားတဲ့ ၉ ကွိမျမွောကျ မျောစကို အစညျးအဝးမှာ မွနျမာစဈခေါငျးဆောငျက အာဏာသိမျးခဲ့တဲ့ လုပျရပျကို ကာကှယျပွောဆိုတဲ့ စကားတှေ
ထညျ့သှငျး ပွောဆိုခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။မွနျမာပွညျ စဈအာဏာသိမျးခံရမှုကို နိုငျငံတကာ အသိုငျးအဝိုငျးကွား ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ ကနျ့ကှကျ ရှုတျခနြခြေိနျ မျောစကို အစညျးအဝေးမှာ မွနျမာ စဈခေါငျးဆောငျ ရှိနတော ဖွဈပါတယျ။
အဲဒီအခကျြကိုကွညျ့ရငျ ရုရှားက စဈတပျအောကျက မွနျမာနဲ့ ဆကျဆံရေး ပိုပွီး တိုးမွှငျ့ တညျဆောကျဖို့ ဘယျလောကျ စိတျအားထကျသနျ နလေဲ ဆိုတာ သိသာနတေယျလို့ ဝဖေနျသူတှကေ ဆိုပါတယျ။
မွနျမာနဲ့ စဈဘကျဆကျဆံရေး တိုးမွှငျ့တညျဆောငျဖို့ ဆကျလကျ လုပျဆောငျမယျ့ အကွောငျး မျောစကိုရောကျ မွနျမာစဈတပျ အကွီးအကဲကို ရုရှား ကာကှယျရေး ဝနျကွီး ဆာဂေးရှိုငျဂူက ပွောခဲ့တယျဆိုတဲ့ သတငျးတှလေညျး ထှကျနှငျ့ပွီး ဖွဈပါတယျ။
မွနျမာစဈခေါငျးဆောငျရဲ့ အခု မျောစကို ခရီးစဉျမှာ ရုရှားသမ်မတပူတငျနဲ့တော့ တှဆေုံ့ဖို့ရာ မရှိဘူးလို့ ကရငျမလငျ ပွောခှငျ့ရ ဒီမီထရီ ပကျရျှကော့ဗျက ထုတျပွနျ ထားပါတယျ။ဒါ့အပွငျ မွနျမာ စဈတပျနဲ့ နီးစပျမှု ရှိတယျလို့ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ ရှုမွငျခံထားရတဲ့ တရုတျ၊
ရုရှား အပါအဝငျ ကုလသမဂ်ဂ လုံခွုံရေးကောငျစီရဲ့ မွနျမာ့အရေး ဆှေးနှေးပှဲတှကေနေ မွနျမာနိုငျငံတှငျး ဒီမိုကရစေီ လမျးကွောငျးပျေါ ပွနျသှားကွဖို့၊ ဖမျးဆီးထားသူတှကေို ပွနျလှတျဖို့ သဘောထား ထုတျပွနျခကျြတှေ ထှကျပျေါ ခဲ့ပါတယျ။
မွနျမာပွညျမှာ စဈအာဏာသိမျးခံခဲ့ရတဲ့ နောကျပိုငျး ပျေါပေါကျလာတဲ့ ဖွဈရပျတှေ အတှငျး အရပျသားတှေ သဆေုံးနရေတဲ့အပျေါ အငျမတနျ စိုးရိမျတဲ့ အကွောငျး ရုရှားအစိုးရရဲ့ ထုတျပွနျခကျြတဈရပျလညျ
း မတျလ အတှငျးက ရှိခဲ့ပါတယျ။မွနျမာ စဈခေါငျးဆောငျရဲ့ အခု မျောစကို ခရီးစဉျမှာ ရုရှားကာကှယျရေးဝနျကွီး ရှိုငျဂူနဲ့ တှဆေုံ့ပါတယျ။ အဲဒီလို တှဆေုံ့ပှဲအကွို ရုရှားဝနျကွီး ရှိုငျဂူက ….
“ဒီတှဆေုံ့ပှဲကို အငျမတနျ အလေးထားပါတယျ။ မွနျမာဟာ အရှတေ့ောငျအာရှနဲ့ အာရှပစိဖိတျဒသေအတှကျ ယုံကွညျစိတျခရြတဲ့ မဟာမိတျဖွဈကွောငျး ဆကျဆံခဲ့တဲ့ ကာလတလြှောကျက သကျသခေံနတေယျ”လို့ ပွောဆိုပါတယျ။
ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျကိုလညျး ဝနျကွီးရှိုငျဂူက ….
“နှဈနိုငျငံကွား တညျဆောကျနှငျ့ပွီး ဖွဈတဲ့ အပွနျအလှနျ နားလညျမှု၊ လေးစား ယုံကွညျမှုတှေ အပျေါ အခွခေံလို့ ဆကျဆံရေး ပိုခိုငျမာအောငျ ဆကျလကျ လုပျဆောငျကွရေး စိတျပိုငျးဖွတျထားပွီး ဖွဈတယျ” လို့ ပွောဆိုခဲ့ကွောငျး ရုရှား သတငျးဌာန RIA က ရေးပါတယျ။
စစ်အာဏာသိမ်းတာဟာ ဒီမိုကရေစီကို ကာကွယ်တာဆိုပြီး မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင် ပြောဆို
မြန်မာပြည်တွင်း ဒီမိုကရေစီစနစ် ပျက်ယွင်းလာနေခဲ့တဲ့ အတွက် ကြိုးစားကယ်ဆယ် ခဲ့ရတယ်လို့ မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင်က မော်စကိုမြို့ နိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေးမှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ ဒီမိုကရေစီကို ကယ်ဆယ်တာဆိုပြီး မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင်က ပုံဖော်ပြောဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်မှောက်ခေတ် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေ အကြောင်း နှီးနှောဖလှယ်ကြတဲ့ နိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေးမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် စကားပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရုရှား ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ကမကထလုပ် ကျင်းပတဲ့ MCIS လို့ အတိုကောက်အသိများတဲ့ ၉ ကြိမ်မြောက် မော်စကို အစည်းအဝးမှာ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်က အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်ကို ကာကွယ်ပြောဆိုတဲ့ စကားတွေ ထည့်သွင်း ပြောဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ြ
မန်မာပြည် စစ်အာဏာသိမ်းခံရမှုကို နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းကြား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကန့်ကွက် ရှုတ်ချနေချိန် မော်စကို အစည်းအဝေးမှာ မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင် ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအချက်ကိုကြည့်ရင် ရုရှားက စစ်တပ်အောက်က မြန်မာနဲ့ ဆက်ဆံရေး ပိုပြီး တိုးမြှင့် တည်ဆောက်ဖို့ ဘယ်လောက် စိတ်အားထက်သန် နေလဲ ဆိုတာ သိသာနေတယ်လို့ ဝေဖန်သူတွေက ဆိုပါတယ်။မြန်မာနဲ့ စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်တည်ဆောင်ဖို့ ဆက်လက် လု
ပ်ဆောင်မယ့် အကြောင်း မော်စကိုရောက် မြန်မာစစ်တပ် အကြီးအကဲကို ရုရှား ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဆာဂေးရွှိုင်ဂူက ပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေလည်း ထွက်နှင့်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ အခု မော်စကို ခရီးစဉ်မှာ ရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့တော့ တွေ့ဆုံဖို့ရာ မရှိဘူးလို့ ကရင်မလင် ပြောခွင့်ရ ဒီမီထရီ ပက်ရ်ှကော့ဗ်က ထုတ်ပြန် ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် မြန်မာ စစ်တပ်နဲ့ နီးစပ်မှု ရှိတယ်လို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရှုမြင်ခံထားရတဲ့ တရုတ်၊
ရုရှား အပါအဝင် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေကနေ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ် ပြန်သွားကြဖို့၊ ဖမ်းဆီးထားသူတွေကို ပြန်လွှတ်ဖို့ သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်တွေ ထွက်ပေါ် ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ စစ်အာဏာသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့ နောက်ပိုင်း ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ အတွင်း အရပ်သားတွေ သေဆုံးနေရတဲ့အပေါ် အင်မတန် စိုးရိမ်တဲ့ အကြောင်း ရုရှားအစိုးရရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ရပ်လည်း မတ်လ အတွင်းက ရှိခဲ့ပါတယ်။ြ
မန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ အခု မော်စကို ခရီးစဉ်မှာ ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ရွှိုင်ဂူနဲ့ တွေ့ဆုံပါတယ်။ အဲဒီလို တွေ့ဆုံပွဲအကြို ရုရှားဝန်ကြီး ရွှိုင်ဂူက ….
“ဒီတွေ့ဆုံပွဲကို အင်မတန် အလေးထားပါတယ်။ မြန်မာဟာ အရှေ့တောင်အာရှနဲ့ အာရှပစိဖိတ်ဒေသအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ မဟာမိတ်ဖြစ်ကြောင်း ဆက်ဆံခဲ့တဲ့ ကာလတလျှောက်က သက်သေခံနေတယ်”လို့ ပြောဆိုပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ကိုလည်း ဝန်ကြီးရွှိုင်ဂူက ….
“နှစ်နိုင်ငံကြား တည်ဆောက်နှင့်ပြီး ဖြစ်တဲ့ အပြန်အလှန် နားလည်မှု၊ လေးစား ယုံကြည်မှုတွေ အပေါ် အခြေခံလို့ ဆက်ဆံရေး ပိုခိုင်မာအောင် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ကြရေး စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီး ဖြစ်တယ်” လို့ ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ရုရှား သတင်းဌာန RIA က ရေးပါတယ်။
Next Article ပဋ်ဌာနျးရှတျဖတျ ပူဇျောကာ ကှယျလှနျသှားတဲ့ သူရဲကောငျးတှအေတှကျ ကောငျးမှုကုသိုလျပွုခဲ့တဲ့ ခိုငျသငျးကွညျ